Adobe illustrator နှင့် Adobe Dreamweaver (CS 6) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Office and Document Tools » Adobe illustrator နှင့် Adobe Dreamweaver (CS 6)
By သန့်ဇင်ဌေး9:21 AM11 comments
ဒီဆော့ဝဲ နှစ်ခုကို တောင်းတဲ့ သူက များနေပြီ . မတင်ပေးဖြစ်သေးလို့ ခုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Portable ဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် System Requirements ကိုလည်း ပုံနဲ့ တွဲပီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဆော့ဝဲက ဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။ တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ Features တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်နဲ့ ဒီလင့်မှာ အသေးစိတ် သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး Adobe Company အကြောင်း သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဖြစ်တည်လာပုံကို သိချင်ရင် ဒီနေရာမှာ သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
adobe illustrator ဒေါင်းလုပ်ချရန်...
Adobe Illustrator CS6 v16.0.0.682.part1
Adobe Illustrator CS6 v16.0.0.682.part2
Adobe Illustrator CS6 v16.0.0.682.part3
Adobe Illustrator CS6 v16.0.0.682.part4
Adobe Illustrator CS6 v16.0.0.682.part5
Adobe Dreamweaver ဒေါင်းလုပ်ချရန်
Portable Adobe Dreamweaver CS6 v12.0 Build 5808.part1
Portable Adobe Dreamweaver CS6 v12.0 Build 5808.part2
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်မှာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့ အထိ English စာလေ့လာလိုသူတွေ အတွက် သင်ခန်းစာပို့ချမူ အစီစဉ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာတွေ ကြားတည်းမှာပဲ့ Google မှာ Software ရှာပုံ ကိုပါ သင်ကြားပို့ချသွားပါမယ်။ စာတန်းလည်းပြီးတဲ့အချိန် ပြည်တော် ပြန်ကာနီး ရက်ပိုင်းအတွင်း စာဖတ်သူတွေ အတွက်အကျိုးရှိဖို့ဒီ သင်ခန်းစာ နှစ်ခုကို ရွေးလိုက်တာပါ။ အချိန်ထပ်ရရင်တော့ ကျွန်တော် Mobile အပိုင်းလေးတွေကို ထပ်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ်လို့ ကြိုတင် အသိပေးလိုပါတယ်။
...အပိုင်ဖြတ်ပြီးတင်ထားလို့ပါ......အပိုင်မဖြတ်ပဲနဲ့တင်လို့မရဘူးလာ...ဥပမာ..MB 900..ဖြစ်ဖြစ် 1GB ဖြစ်ဖြစ်..
Unknown June 10, 2012 at 9:33 PM
အကိုနေမင်းမောင်ရေ ညီလေးနာမည်က ညီမင်းပါ အခုမှကွန်ဖြူတာစကိုင်တာပါ သင်တန်းတွေဘာတွေမတတ်ဖူးဘူးဗျ
အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဝါသနာပါလွန်းလို့ လေ့လာနေတာပါ အင်္ဂလိပ်စာလဲးမတတ်ပါဘူး၅တန်းပဲးအောင်တာ..ဖြစ်နိုင်ရင်အင်္ဂလိပ်စာကို့တတ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ အကို့ ရဲ့ ပို့စ်တိုင်းကို မြန်မာလိုရေးပးပါလားအဂ်လိပ်စာသင်နိုင်မဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းကောင်းလေးစာအုပ်ပဲးဖြစ်ဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ရားပဲးဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ကူညီပါအုံးကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်စောင့်မျှော်နေမယ်အကို
Jumansoe June 19, 2012 at 11:26 AM
ကိုသန့်ဇင်ထွန်းရေ ကျွန်တော်တောillustrator cs6 မ သွားပြီနော်။ကျေးဇူးပါ။
mone tine June 25, 2012 at 12:30 PM
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ အကိုတို့လိုလူမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာများများရှိပါစေဆုတောင်းရပါမယ် ကျွန်တော်တို့လည်း
အလွမ် ကိုကို July 9, 2012 at 4:48 PM
အစ်ကိုရေ ပြန်မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော် .... FB ပါအစ်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် အစ်ကို
illustrator5နဲ့ ကာတွန်းဆွဲကျင့် ဆွဲနေသူပါ...ခု6တွေ့တာနဲ့ ယူပီ...ဒေါင်းလိုက်မယ်...ကျနော်လိုနည်းပညာအားနည်းသူ
illustrator5နဲ့ ကာတွန်းဆွဲကျင့် ဆွဲနေသူပါ...ခု6တွေ့တာနဲ့ ယူပီ...ဒေါင်းလိုက်မယ်...ဒေါင်းတယ်...အဆင်မပြေဘူး...
ကျွန်တော့်လည်း မ,သွားပြီးကိုနေမင်းမောင် ခင်ဗျာ
aung myo zaw May 17, 2013 at 8:59 AM
pai soe January 11, 2014 at 10:10 PM